Neken’ny HCC ny fitoriana, ary dia nesorina tsy ho kandidan’ity vovonana ity i Randrianarisoa Fehilorantsoa Solomampionona Joël, ary dia nofaritan’ny HCC, araka ny andininy faha-2 amin’ny didy navoakany, fa izao no filaharana vaovaon’ny kandida amin’ny lisitra « Isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina » ao amin’ny Distrikan’Ambatondrazaka dia Rakotondrazafy José Alain; Rafaralahy Marin Odet ; Rabeharisoa Gilles ary Randrianarisoa Albert.
Nesorina tsy ho filohan’ny CER (Commission Electorale Régionale) izay rantsamangaikan’ny CENI ato amin’ny Faritra Alaotra-Mangoro ihany koa i Randrianarisoa Fehilorantsoa Solomampionona Joël, hitandroana ny tsy fitanilàna amin'ny fifidianana, araka ny andiny faha-3 amin’io didy navoakan’ny HCC ny zoma 22 martsa io hatrany.
Mpisolovava i Randrianarisoa Fehilorantsoa Solomampionona Joël. Izy no nitarika ny lisitra « Isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina », napetraka teo anivon’ny OVEC Ambatondrazaka, lisitra izay nahafeno fepetra ary nankatoavin’ny CENI ; iray amin’ireo lisitra miisa 19 hifaninana amin’ny toerana solombavambahoaka roa ato Ambatondrazaka.
Ny andalana faha-4 amin’ny andininy faha-24 ny lalàna fehizoro 2018-010 tamin’ny 11 mey 2018 mifehy ny fifidianana solombavambahoaka dia milaza fa tsy azo atao ny misintona ny firotsahan-kofidiana aorian’ny 12 martsa 2019, amin’ny 5 ora hariva, ifaranan’ny fandraisana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana solombavambahoaka. Tranga izay nisy rahateo tato Ambatondrazaka.
Nahazendana ny maro ary miteraka resabe eto Ambatondrazaka ity didy navoakan’ny HCC ity.